I-TidyMarketer: I-All-In-One SaaS Marketing Hub Yemikhankaso Yokukhangisa | Martech Zone
I-TidyMarketer: I-All-In-One SaaS Marketing Hub Yemikhankaso Yokukhangisa
NgoLwesithathu, Septemba 7, 2016 Douglas Karr
Imali esetshenziswa kwabezindaba emhlabeni iyanda ngezinga elingu-5.1%, okulindeleke ukuthi lifinyelele $ 2.1 trillion ku-2019, ngokusho kukaMcKinsey. Isikhangiso sedijithali sichitha silungele thola imali oyisebenzisile ye-TV e 2018. I-TidyMarketer wethule isixazululo somkhankaso wokumaketha nomakhi wohlelo lwezindaba, ikhalenda lomkhankaso, imibiko ezenzakalelayo nokunye okuningi, ngokubambisana kwamaqembu wokumaketha nama-ejensi.
Ipulatifomu le-SaaS livumela abathengisi ukuthi bahlele, baxhumanise, basebenzisane, futhi balinganise konke ukuphathwa komkhankaso kusuka kungxenyekazi eyodwa. Idizayinelwe ukusiza abakhangisi ukuba baqhube imikhankaso ephumelelayo kusuka ekumaketheni nge-imeyili kuya ezinkundleni zokuxhumana, ukukhangisa okukhombisa, i-PR, imicimbi nokunye okuningi.
TidyMarketer's I-othomathikhi yeMedia Plan Builder, elayishwe ngamabhentshimakhi namafomula we-KPI, ivumela abasebenzisi ukuthi bakhe futhi bavumelanise amasu omkhankaso, besebenzisa ukwabiwa kwesabelomali nokusebenza komkhankaso owaziwayo ukubikezela imiphumela yomkhankaso. Lokhu kungaba ukuthengisa okuku-inthanethi, ukufakwa kohlelo lokusebenza lweselula, ukuhola noma okuningi.
Izici zeTidyMarketer zifaka phakathi
Izinhlelo Zokumaketha - Ivumela amaqembu ukuthi akhe izinhlelo zokumaketha eziphelele, agcwaliswe ngokubonakalayo okucacile, kufaka phakathi imiphumela ebekiwe kanye nokutshalwa kwezimali kwabezindaba, okulungele ukwabelana namathimba angaphakathi noma amaklayenti angaphandle. Amathuluzi azenzakalelayo asusa isidingo semibiko yezandla, futhi lokhu kusiza izinkampani ukwenza lula umsebenzi wazo, kunciphise ubungozi bephutha lomuntu futhi ekugcineni kukhulise ukusebenza.
Ikhalenda Lomkhankaso - Hudula bese uphonsa izici nezaziso ezisheshayo, kusho ukuthi amaqembu angaxhumanisa imikhankaso eminingi endaweni eyodwa emaphakathi.
Isiphathi Somsebenzi - Inika amandla abasebenzisi ukwabela imisebenzi kumalungu nokuphatha osonkontileka bangaphandle nama-ejensi.
Ngama- $ 25 / ngenyanga, ubuchwepheshe bezenhlalo obunika amandla ipulatifomu ye-SaaS kuvumela abathengisi ukuthi bahlele, baxhumanise futhi baphathe imikhankaso, konke ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esisodwa esisetshenziswa kalula. Idizayinelwe ukusiza abakhangisi ukuba baqhube imikhankaso ephumelelayo kusuka ekumaketheni nge-imeyili kuya ezinkundleni zokuxhumana, ukukhangisa okukhombisa, i-PR, imicimbi nokunye okuningi. I-TidyMarketer iphinde inikeze isisombululo se-ejensi.
Ukudalula: Sisebenzisa isixhumanisi esihambisanayo seTidyMarketer kule ndatshana
Tags: ikhalenda lomkhankasoukuhlela umkhankasoumphathi womkhankasoukuchitha isikhangiso sedijithalikhangisaimeyili Marketingizenzakalouhlelo lokumakethaprsocial mediaumabhebhana
Ngabe Indlu Yakho Yokukhangisa Yakhelwe Edwaleni Noma Esihlabathini?
Ukuthengiswa Kwesevisi Yokuzenzela noma Intengo Esekelwe Enani - Kusengokuhlangenwe nakho